Myanmar: UN Special Representative for Children and Armed Conflict engages with Myanmar on better protecting children affected by armed conflict
The Special Representative of the Secretary-General (SRSG) for Children and Armed Conflict, Ms. Virginia Gamba, visited Yangon and Nay Pyi Taw from 27 to 29 May 2018.
During her visit she met with State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi; the Deputy Commander in Chief of Defense Services Vice Senior General Soe Win; the Minister of Defense Lt. General Sein Win; the Minister of International Cooperation U Kyaw Tin; the Minister of Labor, Immigration and Population, H.E U Thein Swe; the Union Attorney-General U Tun Tun Oo; the Director General of Social Welfare, Dr. San San Aye, the Joint Monitoring Committee; and with representatives of the United Nations country team, the international community and civil society.
The objectives of the mission included discussion around identification of challenges for the full implementation of the Joint Action Plan signed between the national army, the Tatmadaw, and the United Nations, to end and prevent the recruitment and use of child soldiers; discuss the importance of access to conflict and crisis affected areas of Myanmar, including Shan, Kachin and Rakhine states, in order to undertake objective and impartial monitoring; to advocate for the adoption of the revised draft child rights law and to stress the importance of making child protectionakey ceasefire and peace-building priority . The SRSG also explained the mandate of her Office to protect and prevent the6violations against children, namely, recruitment and use of children by armed forces and armed groups, killing and maiming, attacks on schools and hospitals, sexual violence, abduction and denial of humanitarian access.
“I had frank and constructive discussions with the authorities of Myanmar including the way forward in completing the implementation of the Joint Action Plan. Many measures have already been put in place but we need to expedite completion of this Joint Action Plan” stated SRSG Gamba. It was agreed that the Government would quickly seek to address gaps and barriers toward the implementation of the Action Plan with the support of the UN and civil society partners. “I also shared my concerns regarding the impact of violence on children in the crisis in Rakhine State, and continued conflict in Shan and Kachin States, and underscore the importance of any return being safe, voluntary, dignified and with the appropriate support for affected population”; the SRSG stated that the UN stands ready to provide support as relevant and appropriate.
“We are ready to engage in concrete measures with other listed parties to the conflict mentioned in the Children and Armed Conflict agenda in Myanmar,” SRSG Gamba highlighted. “
Special Representative Gamba also called on the Government of Myanmar to ratify the Optional Protocol on the involvement of Children in Armed Conflict to the Convention on the Rights of the Child, to continue to operate in the spirit of the Paris Principles, and to proceed speedily with the adoption of the draft child law, which could serve as model for integration of protection of children in armed conflict.
During all her discussions with authorities and stakeholders, SRSG Virginia Gamba emphasized the need for sustainable protection policies and approaches that promote prevention in the long term.
“I firmly believe that the use and abuse of children in for and by armed conflict worldwide must be stopped. The children of this world are not just our future, they are also our responsibilities for the present. By protecting our children and prevent any future violations against them, we are buildingasustainable global peace.”
In Myanmar, eight parties to conflict[i] are listed in the annexes of the Secretary-General Annual Report for the recruitment and use of children. The Tatmadaw national army is engaged in an Action Plan with the UN to end and prevent the recruitment and use of children, but the United Nations stands ready to engage with other listed parties.
You can read the latest report of the Secretary-General on children and armed conflict in Myanmar here: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/1099%20%20&Lang=E&Area=UNDOC
Fabienne Vinet/ Stephanie Tremblay, Communications Officer
[i] Listed parties for the recruitment and use of children in Myanmar: Tatmadaw (national army) including border guard forces; Democratic Karen Benevolent Army; Kachin Independence Army; Karen National Liberation Army; Karen National Liberation Army Peace Council; Karenni Army; Shan State Army South; United Wa State Army.
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကလေးသူငယ်နှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်မှ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဒဏ်ခံစားရသူ ကလေးသူငယ်များအား ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် ဆွေးနွေး
နယူးယောက်မြို့၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် မေလ (၂၉) ရက်
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကလေးသူငယ်နှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Virginia Gamba သည် ၂၀၁၈ခုနှစ် မေလ(၂၇)ရက်နေ့မှ (၂၉)ရက်အတွင်း ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော်သို့ လာရောက်ခဲ့သည်။
သူမ၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်၌ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန လူမှုဝန်ထမ်း/ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် တွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဤခရီးစဉ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွင် တပ်မတော်၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရတို့အကြား ရေးထိုးထားသည့် ပူးတွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စီမံချက်(Joint Action Plan)မှ အချက်အလက်များ ပြည့်တင်းစွာ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး၊ ကလေးစစ်သားစုဆောင်းခြင်းများ တားဆီးရပ်တန့်ရေး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသည့် နေရာများတွင် ပြတ်သားတိကျသည့် ဘက်မလိုက်သော လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသများသို့ သွားရောက်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ပြန်လည်စိစစ် တင်သွင်းထားသည့် ကလေးသူငယ်ဥပဒေမူကြမ်းအား အတည်ပြု ပြဌာန်းနိုင်ရန်ခြင်း၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးလုပ်ငန်းများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကလေးသူငယ်ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများအား အဓိကအကြောင်းအရာများအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် ကလေးသူငယ်နှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာကဏ္ဍ၏ အရေးပါလှသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များတွင် အရွယ်မရောက်သေးသည့် ကလေးငယ်များအား စုဆောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်စေခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်လက်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းများနှင့် ဆေးရုံများအား တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ အဓမ္မသွေးဆောင်ဖြားယောင်း ခေါ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ကလေးသူငယ်များအား လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များရရှိခြင်းမှ ကန့်သတ်ခံရခြင်း အစရှိသည့် ကြီးလေးသောချိုးဖောက်မှု အချက်(၆)ချက်အား ကာကွယ် တားဆီးနို်င်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်မအနေနဲ့ ပူးတွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စီမံချက်များ အပြီးသတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး အကြောင်း ပါဝင်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေကို မြန်မာနိုင်ငံက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အတူ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပူးတွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စီမံချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်မှုများရှိလျက် စောလျင်စွာ အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့ ဆက်လက်ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။” ဟု Ms. Gamba ကပြောသည်။ ကုလသမဂ္ဂနှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ မိတ်ဖက်များ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုများဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စီမံချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ရွာတွင် တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲများ ကွာဟချက်များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းကာ ထုတ်ဖော်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ “ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အကြပ်အတည်းတွေ၊ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ ပဋိပက္ခတွေက ကလေး သူငယ်တွေအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေရှိနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်မအနေနဲ့ စိုးရိမ်မိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ယင်းဒဏ်တွေကို ခံစားရသူတွေအားလုံး လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ဖို့ အကြောင်းတွေကို မျှဝေ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။”
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ကလေးသူငယ်နဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ ကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့အတူ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ အဆင်သင့်ပါ။” ဟု Ms. Gamba က အထူး ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲအခြေပြစာချုပ်အား အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန်၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များ ပါဝင်နေမှုအတွက် ပဲရစ်ကတိကဝတ်နှင့် ကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ပါဝင်ပက်သက်နေသည့် ကလေးသူငယ်များအား ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် စံနမူနာအဖြစ်တည်ရှိနေမည့် ကလေးသူငယ် ဥပဒေမူကြမ်းအား စောလျင်စွာ အတည်ပြု ပြဌာန်းနိုင်ရန်အတွက် အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Gamba မှ တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကလေးသူငယ်နှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Virginia Gamba သည် တာဝန်ရှိသူများနှင့် အခြားပါဝင်သူမိတ်ဖက်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ဆွေးနွေးမှုများတွင် ရေရှည်တည်တံ့သည့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် မဟာဗျူဟာများ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတို့နှင့် ပက်သက်ပြီး အထူးအလေးထား ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး “ကလေးသူငယ်တွေကို လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေမှာ ပါဝင်ပက်သက်စေပြီး အသုံးချခြင်း၊ အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်ခြင်းတွေအားလုံး ရပ်တန့်ရမယ်လို့ ကျွန်မလေးနက်စွာ ပြောချင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ နေထိုင်နေတဲ့ ကလေးသူငယ်အားလုံးဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အနာဂါတ်သာမက လက်ရှိကာလအတွက် ကျွန်မတို့ရဲ့ တာဝန်တခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးသူငယ်တွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပြီး သူတို့တွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ချိုးဖောက်ခြင်းတွေက တားဆီးကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
သတင်းအယ်ဒီတာများ လေ့လာနိုင်ပါရန် -
ကလေးသူငယ်နှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် ၁၅၃၉ (၂၀၀၄)၊ ၁၆၁၂ (၂၀၀၅)၊ ၁၈၈၂ (၂၀၀၉)၊ ၁၉၉၈ (၂၀၁၁)နှင့် ၂၂၂၅ (၂၀၁၅)များသည် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများအား ကြီးလေးစွာ ချိုးဖောက်မှုများကို တိုင်းတာသိရှိနိုင်ရန် စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည်။ တိုင်းတာရာတွင် လေ့လာစောင့်ကြည့်မှုနှင့် အစီရင်ခံ တင်ပြမှုများ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချူပ်၏ ကလေးသူငယ်နှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းပါဝင်သည့် အဖွဲ့များမှ ချိုးဖောက်နေသည့် ကိစ္စရပ်များအား ရပ်တန့်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စီမံချက်များရေးဆွဲခြင်း စသည့် အစီအစဉ်များ မှတဆင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချူပ်၏ ကလေးသူငယ်နှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ပဋိပက္ခများအတွင်း ပါဝင်ပက်သက်နေသည့် အဖွဲ့ (၈)ဖွဲ့ရှိသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ကလေးစစ်သားများ စုဆောင်းမှု၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်စေမှုများအား တားဆီးရပ်တန့်သွားစေရန် ကုလသမဂ္ဂနှင့်အတူ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစီမံချက်တွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အခြား ဖော်ပြပါအဖွဲ့များနှင့်လည်း အလားတူလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ရန် ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် အသင့်ရှိပါသည်။
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးသူငယ်နှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကို အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် -
ထပ်မံသိရှိလိုသည်များ ရှိပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် -
Download PDF Version: ENG & MYA